Brainhost မှအခမဲ့ Pinterest စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန် | Martech Zone
Brainhost မှအခမဲ့ Pinterest စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလမ်းညွှန်
သောကြာနေ့, ဧပြီ 13, 2012 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 4, 2017 Douglas Karr
Brainhost မှလူများကကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းညွှန်အသစ်ကို Pinterest နှင့်သင်၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုမည်သို့မြှင့်တင်ရမည်ကိုမြှင့်တင်ရန်ကျွန်ုပ်အားလိုင်းတစ်ခုချလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီးပြီဟုထင်သည်။
သင်အသုံးဝင်မည့်သင်လမ်းညွှန်မှကောက်နုတ်ချက်များ (၃) ခုရှိပါသည်။
လက်ရှိတွင် Chobani ဒိန်ချဉ်၊ Dyson ဖုန်စုပ်စက်၊ Etsy.com နှင့်ကျော်ကြားသော Nike ဖိနပ်တံဆိပ်များသည်လူကြိုက်များသော Pinterest စာမျက်နှာများရှိသည်။ သူတို့၏စာမျက်နှာများ (သို့) ပျဉ်ပြားများသည်အလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အရောင်းစာမျက်နှာများအဖြစ်အသုံးမပြုသော်လည်းအစားထိုးခြင်းဖြစ်သည် အမြင်အာရုံအသုံးအနှုန်းတွေ ကုန်အမှတ်တံဆိပ် (သို့) ၀ န်ဆောင်မှုကိုရွေးချယ်သူတွေနှစ်သက်တဲ့ယဉ်ကျေးမှု၊ လူနေမှုပုံစံစတဲ့အကြောင်း။
Pinning ဘယ်အချိန်မှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးဖြစ်လိမ့်မည် စစ်မှန်သောကွန်ယက်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည် (ဥပမာအားဖြင့်၊ မှတ်ချက်များကိုစွန့်ပစ်သူများ၊ “ ပြန်လည်” နှင့်အခြားသူများနောက်သို့လိုက်သူများသည် Pinterest လှုပ်ရှားမှုမှရရှိသောအမြတ်အစွန်းအများဆုံးရရှိလိမ့်မည်) ။ တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်မနေပါနဲ့ မည်သည့်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုမဆိုကဲ့သို့ပင်အခြားသူများကိုမြှင့်တင်ခြင်းသည်နောက်ဆုံးတွင်၎င်းတို့ကိုမျက်နှာသာပြန်ပေးလိမ့်မည်။ အကယ်၍ ကွန်ယက်သည်သင်၏လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွင်ရှိပါကသင်သည်သူငယ်ချင်းအသစ်အချို့ကိုရှာပြီးသူတို့နှင့်အတူသင်၏အခွင့်အာဏာကိုဆက်လက်တည်ဆောက်လိမ့်မည်။
သို့ဖြစ်လျှင်သင်သည်၎င်းတို့နောက်ကို လိုက်၍ သင်၏အကောင့်အတွက်အကျိုးရှိမည့်လှုပ်ရှားမှုများအားလုံးကိုပြုလုပ်ရမည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ ဒီလမ်းညွှန်တစ်လျှောက်လုံးငါတို့ရည်ညွှန်းခဲ့တဲ့ဒီမုန့်ဖုတ်ဟာမီးဖိုထုတ်လုပ်သူတွေ၊ မုန့်ဖုတ်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူတွေ၊ မုန့်ဖုတ်သူချင်းတွေ၊ ချက်ပြုတ်စာအုပ်စာရေးဆရာတွေ၊ ဤငွေချေးသူသည်မုန့်ဖုတ်တံ၏အချို့သောအရာများနှင့်သက်ဆိုင်ပြီးမှတ်ချက်ပေးသည်သို့မဟုတ်ပြန်လည်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ဤသည်ပရိသတ်ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ချဲ့ ပိုမိုအသွားအလာများအတွက်အခွင့်အလမ်းတွေကိုတိုးပွားစေပါသည် ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့မဟုတ်ဘလော့ဂ်ရန်။
Pinterest ဟာကောင်းမွန်တဲ့ကြီးထွားမှုနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့မီးမောင်းထိုးပြခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ကျနော်တို့အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည် Pinterest အပေါ်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုထည့်သွင်းခြင်း WordPress မှ Pinterest Pinit Button နှင့်အချို့မျှဝေ Pinterest လူ ဦး ရေအချိုးအစား။ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ကျယ်ပြန့်သော Pinterest စာမျက်နှာရှိသည် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Infographics.
Tags: တေးရေးPinterestPinterest လမ်းညွှန်pinterest marekting လမ်းညွှန်
မေလ 26, 2012 မှာ 3: 13 AM
ငါ့ site ကိုပိုကောင်းအောင် Pinterest သုံးပြီးရလဒ်ကတော့ ၃ ပတ်အတွင်း # ၁၈၂ မှနံပါတ် ၇ ကိုကျော်သွားသည်။
လှည့်ကွက်ကတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုလူအများစုကထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်ရမယ်။ ဒါဟာအခက်ခဲဆုံးအပိုင်းပဲ။ Pinterest အသုံးပြုသူအများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့ pin လုပ်ထားသည့်အရာနှင့်မတူပါကပြန်လည်ပတ်ခြင်းကိုလုပ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ငါ fiverr ကို outsource လုပ်ဖို့ငါ့ရဲ့ site ကိုလူ ၇၅ ယောက်ကရအောင်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလုပ်ရမယ်။ သူ fiverr ကို pinterest လို့ရိုက်ပြီးရှာဖွေတာကိုသူဘယ်လိုရှာနိုင်လဲဆိုတာကျွန်တော်မသိဘူး၊ ပြီးတော့သင်ကထိပ်ဆုံးမှာတွေ့လိမ့်မယ်။ များစွာသောအခြားရောင်းချသူများက Pivererest ကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်အတွေ့အကြုံအရသူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကို SEO တိုးတက်အောင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲမသိဘူး
Pinterest သည် SEO အတွက်အဘယ်ကြောင့်ကောင်းသနည်း။
၁။ ဂူးဂဲလ်ကဆိုရှယ်မီဒီယာကိုစိတ် ၀ င်စားသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်ချိတ်ဆက်လယ်ယာအဖြစ်မှတ်ယူမည်မဟုတ်။
၂။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုအရင်ထည့်ပြီးတာနဲ့သူ၌ backlinks အရေအတွက် ၃ ခုရှိသည်။
၃။ (url link မှလွဲ၍) ကျောက်ချစာသားကိုမထောက်ခံပါကကျွန်ုပ်တို့၏သော့ချက်စာလုံးများကိုဖော်ပြရန်ပြီးပြည့်စုံနေဆဲဖြစ်သည်။ Google ကဖတ်ပါလိမ့်မယ် !!
SEO ဆိုသည်မှာသင်၏ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တိုးတက်စေရန်သင် pins နှင့် link များချိတ်ထားရန်လိုအပ်သည်။